प्रहरीले कपडा र जुत्ता लाउनै नपाउने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रहरीले कपडा र जुत्ता लाउनै नपाउने
प्रकाशित मिति २० मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक बर्षको ६ महिनासम्म पनि कुनै पनि सामान खरिदको टेण्डर खुलेको छैन । प्रहरीमा सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदारहरूले प्रहरीको सामानको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गराउन गृहमन्त्रीका आसेपासेहरूबाट दबाब दिएका कारण पनि टेण्डर खुल्न बिलम्ब भइरहेको स्रोत बताउछ । ठेकेदारहरूले प्रबन्धका हाकिमहरूलाई समेत प्रभावमा पारी स्पेक परिवर्तनको चलखेल गर्दैआएको चर्चा छ ।
हरेक बर्ष सामानको स्पेक परिवर्तन गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक ब्ययभार पर्न जान्छ । सबैभन्दा ठूलो रकमको खरिद हुने चुस्ता, डीएमएस बुट, ऊलन सर्ट, ऊलन पाइन्ट, कटन सर्ट, कटन पाइन्ट, स्वीटर र अन्डरभेष्ट ट्राउजर हुन् । यी सामानमा ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा स्पेक परिवर्तनको चलखेल भइरहेको छ । पहिलो पटक कुवेर राना आइजीपी हुँदा चुस्ताको स्पेक परिवर्तन गरेका थिए ।
त्यसपछि त्यो चुस्ता काम नलाग्ने भयो भनेर प्रकाश अर्याल आइजीपी हुँदा पुनः चुस्ताको स्पेक परिवर्तन भयो । फेरि एक बर्षमै किन स्पेक परिवर्तन गर्नुप¥यो ? यसको पछाडि ठेकेदारहरूको आर्थिक चलखेलले काम गरेको प्रहरी स्रोत बताउछ । प्रहरी नेतृत्वलाई पनि ठेकेदारहरूले गृहमन्त्रीका छोरा प्रतीक थापामार्फत् ब्यापक दबाब परिरहेको चर्चा पनि छ ।
त्यही दबाबका कारण पनि मंसिरको अन्तिमसम्म पनि प्रहरीले टेण्डर निकाल्न नसकेको बताइन्छ । अहिले नै टेण्डर निकालेर ठेकेदारलाई आसयपत्र दिंदा २ महिना बित्छ । २ महिना ठेक्का प्रक्रिया सक्दा ८ महिना लाग्छ । असार १० देखि १५ सम्म सामान बुझाइसक्नुपर्ने प्रहरीको नीति रहेको छ ।
३ महिनामा कसरी ठेकेदारले सामान तयार गरी बुझाउन सक्छ ? टेण्डर नगरेर यस्तै अन्योलको अवस्था रहे प्रहरीले कपडा लाउनै नपाउने भएका छन् । ब्यवहारिक पक्षलाई मनन गरेर फटाफट काम गर्ने दिन नेपालमा कहिले आउला ? यो प्रश्न कहिलेसम्म जीवित रहला ? अनि जवाफ दिन को अघि सर्ला ? (साँघु)
श्रीलङ्काको गिर्जाघरमा विस्फोट हुँदा २० को मृत्यु, कयौं घाईते
एजेन्सी । श्रीलङ्काकामा इसाई धर्मावलम्बीहरूले इस्टर पर्व मनाइरहँरेको बेला गिर्जाघर र होटलहरूमा आईतबार विस्फोट भएको छ ।
विस्फोटमा परी २०…
कर्मचारीले अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न नपाउँने
काठमाडौँ ।तपार्इँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न है । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ । तर…
रक्तदान गर्न महिला किन डराउछन ?
काठमाडौं । नेपालमा अझै महिला रक्तदाताको संख्या न्यून रहेको छ । ‘रक्तदान गर्दा कमजोर भइन्छ’ भन्ने मानसिकताले पुरुषको तुलनामा…
काठमाडौँ । वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा करोडौँमा खरिद गरिएका उपकरण ताला लगाएर राखिएको छ । उता राजधानीकै कान्ति…
छताछुल्ल कांग्रेसमा गुट मौलायो, देउवा, पौडेल गुटबाहेक तेस्रो गुटका रुपमा सिटौला समूह पनि स्थापित !
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक गुटउपगुटको जरा झन् फैलँदै गएको छ…
रोल्पा। माडीगाउँपालिका– २ घर्तीगाउँबाट आज बिहान प्रहरीले ठूलो मात्रामा चरेशसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।